१ पासवर्ड अब म्याकबुक प्रो टच बार र टच आईडी समर्थन गर्दछ म म्याकबाट हुँ
आजको बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय, उत्तम र सब भन्दा पूर्ण पासवर्ड ब्यबश्थापन अनुप्रयोगहरू मध्ये एक, १ पासवर्डले भर्खर एउटा रोचक अपडेट जारी गरेको छ जसमा समावेश छ नयाँ एप्पल म्याकबुक प्रोहरूको साथ अनुकूलता, उनीहरूको पहिलो क्रेताहरू सम्म पुग्न सुरू गर्नु अघि नै.
अबदेखि, म्याकबुक प्रो प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ प्रयोग गरेर यो पासवर्ड प्रबन्धकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुनेछन् टच बार, एक OLED टच बार जुन परम्परागत मेकानिकल फंक्शन कुञ्जीहरू बदल्छ; यसबाहेक, टच आईडीको लागि समर्थनलाई पनि धन्यवाद १ पासवर्ड फिंगरप्रिन्ट प्रयोग गरी अनलक गर्न सकिन्छ.
1 १ पासवर्डले म्याकबुक प्रोको आगमनको पूर्वानुमान गर्दछ
2 1Password 6.5 मा सबै समाचार म्याकबुक प्रो को लागी
१ पासवर्डले म्याकबुक प्रोको आगमनको पूर्वानुमान गर्दछ
१ पासवर्डवर्ड टोलीले यसको ह्या hang्ग पाइसकेको छ, र कुन तरिकामा! हामी नयाँ म्याकबुक प्रोहरू स्टोरहरूमा उपलब्ध देख्न सक्नु भन्दा पहिले र पहिलो प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको उपकरणहरू प्राप्त गर्नु अघि, १ पासवर्डले एप्पलको नयाँ प्रोफेशनल ल्यापटपको लागि समर्थन यसरी थपेको छ कि यसरी टच बार र टच आईडी मार्फत यो पासवर्ड प्रबन्धक प्रयोग गर्न अब सम्भव छ यी किटहरूमा समावेश
स्पष्ट रूपमा, हामीले अझै यी नयाँ कार्यहरू वास्तविकतामा कसरी काम गर्दछन् भनेर पर्खनु पर्नेछ तर हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि टच आईडी मार्फत १ पासवर्ड अनलक गर्ने सुविधा अनुप्रयोगको सुरक्षा प्राथमिकताहरू प्यानेलबाट सक्रिय गर्न सकिन्छ। यसैले, मास्टर पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुको सट्टा केवल पाठकमा तपाइँको औंला राख्नु आवश्यक पर्दछ।
अर्कोतर्फ, टच बारको लागि थप गरिएको समर्थनले कोटिहरू परिवर्तन गर्न, खोजी प्रयोग गर्न, भोल्टहरू बन्द गर्न वा नयाँ प्रविष्टिहरू सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछ।
1Password 6.5 मा सबै समाचार म्याकबुक प्रो को लागी
१ पासवर्डवर्ड अपडेटमा एक टन समावेश छ नयाँ सुविधाहरू र कार्यहरू जुन अनुप्रयोग विकास टोलीसँग यस पूर्ण र कहिलेकाँही हास्यास्पद तरीकामा विस्तृत छ:
शानदार रहस्यहरू र तिनीहरूलाई कहाँ फेला पार्ने
- १ पासवर्डवर्ड अब तपाइँको फिंगरप्रिन्टको साथ नयाँ म्याकबुक प्रोमा टच बारको साथ खोल्न सकिन्छ!
- टच बार समर्थन आइपुगेको छ! १ पासवर्ड प्रयोग गर्दा तपाईको नयाँ म्याकबुक प्रोमा टच बारमा नियन्त्रणहरू बढेको देख्नुहुनेछ।
- टोलीमा पहिलो पटक १ पासवर्ड खोज्नु सपना हो। उठ्न र चालन सजिलो बनाउनको लागि हामीले स्क्र्याचबाट सम्पूर्ण स्थापना अनुभव पुन: लेख्यौं।
- अल्फ्रेड जस्ता अनुप्रयोगहरूसँग तपाईंको भोल्टहरू खोज्नका लागि उत्तम एकीकरण।
== तपाइँको फिंगरप्रिन्टको साथ खोल्नु तपाइँको औंलाहरु पछाडिको जत्तिकै सजिलो छ ==
कुनै हिज्जेको जादुई रूपमा तपाइँको फिंगरप्रिन्टको साथ १ पासवर्डलाई अनलक गर्न आवश्यक छैन। केवल टच आईडी सेटिंग्स को सक्रिय गर्नुहोस् 1 पासवर्ड सुरक्षा प्राथमिकताहरु मा र तपाइँ राम्रो गर्न जान सक्नुहुन्छ। यद्यपि, कसैले पनि तपाईंलाई दोष दिँदैन यदि तपाईं चुपचाप सास फेर्नुभयो भने "अलोहोमोरा" सास अन्तर्गत तपाईंले यो मन्त्र प्रदर्शन गर्दा।
== तपाईंको भद्र जादू अभ्यास गर्नुहोस् ==
नयाँ टच बार Weasley को विजार्ड Wheezes मा नवीनतम सम्झौता प्राप्त गर्न को रूप मा लगभग प्रभावी छ (तर डर तत्व बिना)। अब तपाइँ हाम्रो नयाँ टच बार सुविधाको साथ भोल्टहरू बीच स्विच गरेर भद्र जादू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो भ्याल्टहरू छिटो पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ: "विing्गार्डियम लेभिओसा" भन्दा यो लिनको लागि।
अन्य स्पेलहरू जुन तपाईं टच बारको साथ संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ समावेश गर्दछ:
- नयाँ वस्तु थप्दै
- तपाई कुन कोटी बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने विकल्प
- भोल्ट रोक्ने काम "कन्फ्रिन्गो", जादू कस्टिंग भन्दा सजिलो छ।
- खोज सक्रियता (गोल्डेन स्निच फेला पार्न र म्याच जित्न, निश्चित रूपमा)
== सबै प्लेटफर्म9///! ==
नयाँ म्याकमा पहिलो पटक १ पासवर्ड खोज्दै अब बटरबीयरको पहिलो घूंट जस्तो छ: न्यानो, आमन्त्रित गर्ने, र मीठो मीठो! हामीले हाम्रो पहिलो रनको अनुभवलाई फेरि लेखेका छौं यो पहिले भन्दा पहिले भन्दा पहिले सजिलै बनाउनको लागि १ पासवर्डको साथ शुरू गर्न। चाहे तपाईं आफ्नो 1Password.com खाता पहुँच गर्दै हुनुहुन्छ, iCloud वा ड्रपबक्समा तपाईंको भोल्टको साथ समन्वयन गर्दै, वा पहिलो पटक सुरू गर्दै; यो तात्कालिक हो।
== जहाँबाट तपाईंको लेखहरू अपरेट गर्नुहोस् ==
केहि उत्तम मंत्र सँगै बनेको छ, त्यसैले हामीले ती व्यक्तिहरूको लागि प्रेम औषधि तयार पार्‍यौं जुन हाम्रो तेस्रो-पक्ष एकीकरण प्रयोग गर्दछ। हामी उत्पादक छनौट अनुप्रयोग भित्रबाट आइटमहरूको लागि सबै भोल्टहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्न हामी हाम्रा केही देव मित्रहरूसँग नजिकै काम गरिरहेका छौं। अल्फ्रेडले यो नयाँ एकीकरणको लागि पहिले नै अपडेट पोस्ट गरिसकेका छन् र त्यहाँ अझ धेरै आउन बाँकी छ!
== बर्ट्टी बोटको स्वाद भन्दा बढी गुडी! ==
यी केवल हाइलाइटहरू हुन्, यो संस्करण १०० भन्दा बढी नयाँ सुविधाहरू, सुधार, र फिक्सहरूले भरिएको छ। १ पासवर्डले कहिले पूनरावलोकनको लागि सोध्दैन, किनकि तपाईको वर्कफ्लोको मान अवरोधको लागि धेरै छ। यदि तपाईं उदार महसुस गर्नुहुन्छ वा केही मिनेट छ भने, कृपया हामीलाई एक टिप्पणी दिनुहोस्। यो हाम्रोलागि ठूलो भिन्नता हो। अग्रिम धन्यवाद!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » १ पासवर्ड अब म्याकबुक प्रो टच बार र टच आईडी समर्थन गर्दछ
म म्याकबुक प्रो आरक्षण, एप्पलको ईन्जिनियर giggles, ट्रम्पको आगमन र अधिक चार्ज गर्दछ। SoydeMac मा हप्ता को सबै भन्दा राम्रो